Kubukeka zisobishini izikhulu eMkhanyakude - Bayede News
Kubukeka zisobishini izikhulu eMkhanyakude
Elomhlaba selwenabela kwaMaphumulo
KUNGAKAPHOLI maseko kuputshuke umbiko woMcwaningimabhuku oqukethe okushaqisayo ngokusetshenziswa budlabha kwezigidi zemali eMkhandlwini waseMkhanyakude leli phephandaba selithole obunye ubufakazi benkohlakalo ethinta inkampani yemeya, uMnu uJeffery Vilane.
Lokhu kulandela incwadi edalula ukuthi inkampani yemeya uMnu uVilane, iHydro Services & Fabrication isiphinde yagixabezwa ithenda ka-R3,206,910 engakafakwa iVAT ayithole ngonyaka odlule sekukhishwe umbiko woMcwaningimabhuku okwenziwe.
UMbiko woMcwaningimabhuku wezi-2013 kuya kuNhlangulana 2014 uphinde uveze nezikhulu ezisebenzela iminyango kahulumeni kanye nesikhulu esiphezulu sesikhungo esengamela ukhetho KwaZulu-Natal ebezizixephulela umkhoma kuMasipala.
Yize izikhulu zikaMasipala uMkhanyakude lo Mbiko woMcwaningimabhuku ziwuthole ngoNhlangulana wezi-2014 kubonakala zingawunaki njengoba ngoMandulo kuvela ukuthi ziqhubekile nokugixabezana ngamathenda.
Izincomo zoMbiko woMcwaningimabhuku zikubeka kucace ukuthi kumele zibekwe amacala zonke izikhulu namakhansela abathinteka kulo mkhonyovu wokunikezana ngamathenda eMkhanyakude.
NgokoMbiko kaMcwaningimabhuku uveza ukuthi lo Masipala ovele udonsa kanzima kwezezimali ulahlekelwe imali ebalelwa ezigidini ezingama-R556,24 ngenxa yokukhishwa kwamathenda obekuhlomula kuwo izikhulu zikamasipala kanye nesikhulu esisebenzela isikhungo esengamele ukhetho KwaZulu-Natal.
Umthombo ongaphakathi eMkhanyakude ubikele iBAYEDE ukuthi ukuputshuka kwalo mbiko kufane nesibusiso emaqenjini aphikisayo eMkhanyakude ngoba besebewufune bancama umbiko ungakhishwa.
Kodwa okhulumela uMasipala uMkhanyakude, uMnu uMduduzi Dlamini encwadini evuthayo ayibhalele iBayede uzichithe njengembudane zonke izinsolo ezibhekiswe emkhandlwini nokuthi lo mbiko ubuἀhliwe.
“NjengoMkhandlu siἀsa ukucacisa ukuthi umbiko we-AG oqukethe izincomo awusiyo imἀhlo. Wethulwa esigungwini somkhandlu ngu-Auditor General. UMkhandlu waze wancoma ukuthi kwenziwe uphenyo yi-Ad Hoc Committee eyakhiwe ngamakhansela awowonke amaqembu ezepolitiki engingabala kuwo uMnuz uSphe Mdaka we-ANC noMnu uVelenkosini Hlabisa we-IFP,’’ kufundeka incwadi kaDlamini.
UMnu uDlamini uthe amalungu ekomiti le-Ad Hoc Committee aseke ahlangana iziqubu ukukhenya ngalezi zinsolo eziqukethwe embikweni ka-AG. UMnu uDlamini ukhwele wadilika ephephandabeni iBAYEDE elisola ngokuchema kulolu daba ngoba ethi alizinikezanga izikhulu zomkhandlu ukuba nazo ziphawule. Kuphela intatheli ixhumane no-IEC kanye noMnu uLennox Mabaso okhulumela umnyango wakwaCogta KwaZulu-Natal.
“Umkhandlu ngeke uphawule ngokuthinteka kwemeya uVilane ngoba sisalinde ikomiti eliqokelwe ukuphenya lezi zinsolo ukuba lilethe umphumela walo ngophenyo,’’ kuqhuba uMnu Dlamini.
“Sifuna ukukudalula kuBAYEDE ukuthi sesizinqamulile zonke izinkampani ezithintekayo ebezithola umsebenzi. Siphinde safaka nomshini okwazi ukuthola bonke abantu abasenzela imisebenzi kodwa besebenzela iminyango kahulumeni,’’ kufundeka incwadi kaMnu uDlamini.
UMnu uDlamini wesabise ngokumangalela iBAYEDE kuPress Ombudsman, uma leli phephandaba lingaxolisi. “UMasipala Wesifunda uMkhanyakude awuwuphonseli inselelo umbiko ka-AG, kodwa uMasipala ucela iphephandaba iBayede ukuba lishicilele udaba usuke wezwa novo lukaMasipala noma wenze ukuba uMasipala uziphendulele kulokhu okushicilelwa iphephandaba. Kulokhu asizange sinikezwe ithuba njengoMasipala ukuba siphefumule ngalolu daba,’’ kufundeka impendulo kaMnu uDlamini.
Uqhuba uthi uMkhandlu wenza isincomo sokuba kukhethwe ikomiti elizokwenza uphenyo olunzulu mayelana namakhansela ahwebelana noMkhandlu. Nempela kwakhethwa amakhansela avela kuzo zonke izinhlangano okubalwa kuwo: “Ukhansela uShile Mdaka we-ANC, uKhansela uL.V. Khumalo we-ANC, uKhansela uNtshele weNFP, uKhansela uV.F. Hlabisa we-IFP, kanye noKhansela u-A.T. Zikhali we-IFP.
Kodwa uMnu uDlamini ushone ezintangeni njengoba engacacisi ukuthi ngabe inkampani kaMnu uVilane isaqhubeka yini nokuthola umsebenzi kuMasipala ngemuva kokuphuma kombiko we-AG.
Ukuqinisekisa lokhu iBAYEDE inekhophi yencwadi esayindwe nguMnu u-Elloit Mzimela oyiMeneja yoMkhandlu kuyona enikeza inkampani kaMnu uVilane ithenda ka-R3,206,910 yokuyokudweba nokulungisa isikhungo sokuhlanza amanzi, iMtubatuba Water Treatment emnika ngokusebenzisa uMthetho weSigaba 32 okungukuthi lowo ngumsebenzi ophuthumayo okungamele kulandelwe uhlelo lokukhishwa kwamathenda.
Le thenda isayindwe ngomhla zili-12 kuMandulo 2014. Ukuvela kwalezi zindaba zakamuva zezinsolo zomkhonyovu kubonakala kuzomthwalisa kanzima uMnu uVilane emaqenjini aphikisayo njengoba kumanje kulindeleke ukuba azovela phambi kweSigungu Esiphezulu soMkhandlu ezophendula imibuzo ngokuthinteka kwenkampani yakhe ekunikezweni ngamathenda kuMasipala awuphethe.
Lokhu kulandela ngemuva kokuthi isigungu esiphezulu samakhansela omkhandlu ngoLwesitahthu emukele ngo-elethu isiphakamiso ebesifakwe yiqembe le-IFP sokuba uMnu uVilane abizelwe ngaphambili azoziphendulela ngodaba olishicilelwe yiBAYEDE lwezinsolo zenkohlakalo eziqukethwe embikweni woMcwaningimabhuku.
Umthombo ongaphakathi kuMasipala uMkhanyakude upotshozele iBAYEDE ukuthi uMnu uVilane ukhombe ngenjumbane uzakwabo, uMnu uMzimela emsola ngokuthi nguye opotshozele abezindaba lo mbiko woMcwaningimabhuku njengoba uMnu uMandla Zungu we-IFP ethe bengamaqembu aphikisayo besebewufune bancama kusukela ngonyaka odlule.
“Wonke amakhansela asemukele ngo-elethu isiphakamiso se-IFP ukuba uVilane abizelwe ngaphambili. Kubhekeke ukuba avele phambi kwesigungu esiphezulu ngasekuqaleni kwesonto lenyanga ezayo,’’ kusho umthombo.
Ezinye izindaba ezithinta uMkhanyakude:
Bayede News Aug 21, 2015